होला त विवाह ! - बलिउड - साप्ताहिक
चलचित्रमा प्रभाश र अनुष्का शेट्टीको जोडिलाई दर्शकले खुबै रुचाए । त्यसैले पनि पर्दामा उनीहरूको केमेस्ट्री गज्जब चल्यो । चलचित्रभन्दा बाहिर यो जोडीको सम्बन्ध गुपचुप रूपमा बलियो बन्दै गएको हल्ला समेत चल्न थालेको छ ।
उनीहरू आफूहरूबीच हुर्किरहेको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने प्रयासमा छन् । बलिउडमा यो पनि हल्ला छ कि प्रभास र अनुष्का चाँडै विवाह गर्ने तयारीमा छन् । यद्यपि यो जोडीले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् ।
केही समय अघि प्रभाशले यो विषयमा बोल्ने हो भने आगो लाग्नेछ भन्दै कुरा पन्छ्याएका थिए । आखिर यो कुरा साँचो हो भने ढिलो चाँडो सबैले थाहा पाउने नै छन् ।
मुंगडाको आलोचना फाल्गुन ९, २०७५
प्रियंकाको स्ट्याच्यु फाल्गुन ८, २०७५
रणवीर र वरुणको चाहना फाल्गुन ७, २०७५
बलिउड भर्सेस हलिउड फाल्गुन ६, २०७५
बलिउडका आइकोनिक लभ स्टोरी माघ २९, २०७५
महँगा पाँच आइटम गल्र्स माघ २५, २०७५
साराका बाले भने– मिडियामा धेरै नआउनू माघ २३, २०७५
इतिहास रच्दै अभिताभ माघ २०, २०७५
मलाइका–अर्जुनको बिहे पक्का ! माघ १७, २०७५
दीपिकाको खानपान माघ १६, २०७५